सम्पादकीय : आइसोलेसन सेन्टरको विरोध बन्द गरौँ,भक्तपुरले शरणलाई मरण दिएको इतिहास छैन — Bhaktapurpost.com
सम्पादकीय : आइसोलेसन सेन्टरको विरोध बन्द गरौँ,भक्तपुरले शरणलाई मरण दिएको इतिहास छैन
संजीप शुभचिन्तक भक्तपुर, २८ माघ
बिक्रम सम्बत १८२६ कात्तिक सम्म भक्तपुर बेग्लै राज्य थियो । सोही वर्ष मङ्सिर १ गते यो तत्कालिन गोर्खा राज्यको एकीकरणमा परेको थियो । गोर्खाली राजा पृथ्वी नारायण शाहले भक्तपुरका तत्कालिन राजा रणजीत मल्ल आफ्नै मित बुबा भएकोले आक्रमण गरेका थिएनन तर कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्ल र पाटनका तेजनरसिंह मल्ललाई शरण दिएपछि गोर्खा र भक्तपुरको सम्बन्ध बिग्रिएको इतिहासमा उल्लेख छ । शरण दिएकालाइ मरण हुन नदिने दृढ संकल्प लिएपछि अन्तत: युद्ध भएको र भक्तपुरले आफ्नो राज्य गुमाएको इतिहास पढ्न पाइन्छ । आफ्नो राज्य गुमाउनु पर्दा समेत शरण दिने संकल्पबाट बिचलित नभएको तत्कालिन सत्ताको चरित्र यतिबेला एकादेशको कथा झैँ बन्न पुगेको देखिन्छ ।
यतिबेला राज्यमाथि अरुलाई होइन, आफ्नै नागरिकलाई नै उद्धार गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भैरहेको छ । चीनको वुहान र हुवेइ क्षेत्रमा महामारीकै रुपमा फैलिएको नोभेल कोरोना भाइरसका कारण त्यहाँ फसिरहेका खासगरी नेपाली विद्यार्थीहरुको बिलौना ह्दयविदारक छ । तिनका बाआमा र आफन्तहरुले मात्र होइन, मुटु भएका जोकोही मान्छेहरुले मुटु छियाछिया हुनेगरी उनीहरुको दुख महसुस गर्न सक्छन । तर, यस्तो अवस्थामा पनि भक्तपुर उनीहरुलाई आफ्नो ठाउमा राख्न नल्याउन आवाज उठाउछ भने भक्तपुरले मानवताको मूल्यमान्यता विर्सिएको देखिनु स्वभाविकै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा भक्तपुर एउटा भिलेनको भूमिका निभाइरहेको प्रतित हुन्छ जो आफ्नो स्वार्थका लागि अर्काको स्वार्थलाई आत्मसाथ गर्न सकिरहेको छैन ।
सरकारले चीन बाट नेपाल फर्कने इच्छा राखेका १८० जनालाई भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा पर्ने खरिपाटी स्थित विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्र र सूर्वाविनायकस्थित सैनिक ब्यारेकमा ‘आइसोलेसन सेन्टर’ बनाएर राख्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । पहिलो दिनबाट नै खरिपाटीमा उनीहरुलाई ल्याइन नहुने भन्दै विरोध प्रदर्शन भएको थियो । चाँगुनारायण नगरपालिकाको नगर सभाले समेत उनीहरुलाई अन्यत्र राख्न सरकार संग अनुरोध गर्ने निर्णय नै गरेको छ । भक्तपुरका कुनैपनि राजनीतिक दल अथवा संघसस्थाले सरकारी निर्णयलाई स्वीकार गरेको देखिएको छैन । सिधा सिधा भन्ने हो भने चीनबाट नेपाली ल्याएर राखे भक्तपुरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन्छ भन्ने आम सोचाइले भक्तपुर त्रसित बनेको देखिन्छ । जनतालाई कोरोना भाइरसबारे सुसूचित गर्नु र उद्धार गर्न लागिएका नेपाली भाइरस संक्रमित होइनन भन्ने बुझाउनुको साटो उल्टै उनीहरुलाई ल्याउनु हुदैन भन्ने मानसिकताले प्रेरित स्थानीय सरकार र राजनीतिक दलहरुका व्यवहारका कारण भक्तपुरका स्थानीय भ्रमित र त्रसित बन्नु स्वाभाविकै हो ।
भक्तपुरलाई कोरोना भाइरस र उद्धार गर्ने भनिएका नेपालीको अवस्था बारे अवगत गराउने प्रयास कहीं कतैबाट भएको देखिएको छैन । त्यहाँ फसिरहेका नेपालीमा भक्तपुरले आफ्नै छोराछोरी वा दाजुभाइ दिदीबहिनीको अनुहार देख्न सक्ने बातावरण कोहि कसैले बनाउन खोजेको पनि देखिंदैन । चीनमा रहेका भक्तपुरकै विद्यार्थीसमेत भक्तपुरको विरोध अनलाइनबाट देख्न पढ्न बाध्य छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत चीनको वुहानमा रहेका नेपालीलाई छिटो स्वेदश फर्काउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यहाँ रहेका नेपालीमा भाइरसको संक्रमण हुने जोखिम बढेको भन्दै आयोगले यस्तो निर्देशन दिएको हो । यस्तो अवस्थामा भक्तपुर कसरी मानवता बिरोधी बन्न सक्छ ? तैपनि समाचारका प्रत्येक शब्दमा भक्तपुरले गर्दा नै उद्धार हुन नसकेको झैँ चित्र प्रस्तुत गरिंदा चीनमा रहेका नागरिक र तिनका आफन्तजनमा भक्तपुरप्रति एउटा भिलेनको प्रतिमूर्ती जबर्जस्ती स्थापित गर्ने प्रयास भैरहेको छ ।
राज्यले भरोसा दिन सक्यो भने भक्तपुरले पनि राज्यलाई भर दिने कुरामा द्विविधा गर्नुहुदैन । तर, राज्यले त्यो भरोसा दिलाउन सकेको छैन । चीनबाट उद्धार गरिने नेपाली विरामी होइनन र उनीहरुलाई यहाँ ल्याउदा भाइरस फ़ैलदैन भन्ने कुराको विस्वास दिलाउन नसक्नुले सरकार आफै समेत यस विषयमा विस्वस्त हुन नसकेको पो हो कि भन्ने भान हुन्छ । यदी ल्याउदा खतरा छ भने नलुकाई भनिदिए हुन्छ । मित्रराष्ट्र पाकिस्तानले यस अघि नै आफ्ना नागरिक फिर्ता नल्याउने भनिसकेको छ । होइन, खतरा हुन्न्ना भने कन्भिन्स गर्न किन खोजिरहेको देखिदैन ? राज्य संचालक हुनुको नाताले सरकार आलोचना गर्न लायक भएको छ । १ हजार बढीको ज्यान गैसक्दा पनि र चीनलाई संक्रमण नियन्त्रमा चुनौती भैरहदा पनि आफ्ना नागरिक ल्याउछु भन्दै अलपत्र छाडीराख्ने काम सरकारको सुस्तताको अर्को उदाहरण बनेको छ । तर, सरकारलाई मात्र दोष थुपारेर हामी पानी माथिको ओभानो हुन सक्दैनौ । अख्तियारको अनुसन्धानको विषयलाई लिएर संसद नै अवरुद्ध गर्नसक्ने प्रमुख प्रतिपक्ष दलको यस विषयमा भएको पहलकदमी पनि आलोचनामुक्त छैन । नेपाली संचारजगतले समेत कोरोना भाइरसबाट सतर्क बनाउनु साटो आतंकित पार्ने समाचारलाई प्राथमिकतामा राख्नु हुँदैन भने राजनीतिक विषयमा मात्र जुर्मुराउने नागरिक समाजले यस विषयमा आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउनु जरुरी छ । भक्तपुर ‘आइसोलेसन सेन्टर’ का लागि ठिक कि बेठिक भन्ने कुरा विज्ञ समुदायले सुसूचित गरिदिनुपर्दछ।
भक्तपुरमा ‘आइसोलेसन सेन्टर’ राख्न नदिनेसम्मको नारा–जुलुसले मानवीय संवेदनामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । यहाँका राजनीतिक दलहरु भोटको राजनीति बाट माथि उठ्न नसकेको आभाष भैरहेको छ भने स्थानीय आस्वस्त हुन नसकिरहेको देखिन्छ । नागरिकका लागि राज्य भन्दा माथि कोहि हुन सक्दैन । राज्य संचालक हुनुको नाताले सरकारले आफ्नो नागरिकप्रति देखाउनुपर्ने विवेक र अपनत्व प्रदर्शन गरोस् । आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले अविलम्ब गरोस्, मानवताको सवालमा भक्तपुर भावसून्य हुनै सक्दैन ।आइसोलेसन सेन्टरको विरोध बन्द गरौँ । भक्तपुरले राज्य नै गुमाएको इतिहास छ तर शरणलाई मरण दिएको इतिहास छैन ।